KO HTUN - International News
Domain names များအကြောင်း ရော်ရီဆယ်လင်ဂျုန်းနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ခြင်း
အခုတလောမှာ Domain names တွေနဲ့ ပတ်သက်လို့ အရင်လို တင်းကျပ်တဲ့ စည်းမျဉ်းတွေ မထားတော့ဘဲ စိတ်ကြိုက် အမည်တွေ ယူဖို့ ခွင့်ပြု လာကြတာကြောင့် လူတွေရဲ့ ၎င်းကိစ္စ အပေါ် စိတ်ဝင်စားမှုတွေ လည်း မြင့်တက်လာခဲ့ ရပါတယ်။ နိုင်ငံတကာ အင်တာနက်အဖွဲ့အစည်း ကြီးဖြစ်တဲ့ ICANN ဟာပြီးခဲ့တဲ့ ရက်များအတွင်းကပဲ top level domain names တွေလို့ခေါ်ကြ တဲ့ .com.uk စတဲ့နာမည်ကျော်တွေ အပေါ် စည်းကမ်း တင်းကျပ်စွာ သတ်မှတ်ထားမှုတွေကို ဖြေလျှော့ ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီဆုံးဖြတ် ချက်တွေအရအခုအခါမှာလူတွေဟာ မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ဆိုက်လိပ်စာတွေကို ကိုယ့်ရဲ့ကုန်အမှတ် တံဆိပ်နာမည် နဲ့သုံးနိုင်ကြတော့မှာဖြစ်သလို၊ကိုယ့် ရဲ့ပင်ကိုယ်နာမည်ရင်းတွေနဲ့ လည်း domain names တွေဖန်တီးနိုင် တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။
Top level domain name ဆို တာဘာလဲ။
Top level domain name (TLD) ဆိုတာဟာကိုယ့်ရဲ့ Web adress့ မှာနောက်ဆုံးအစက်က လေး။ိသအ ပြီးတဲ့နောက်ရှိတဲ့ အရာ ကိုခေါ်တာပေါ့။ ဒါ့ကြောင့်ဥပမာ .com ? .org ? .net စသည်ဖြင့် ရှိနေတာလေ။ မကြာသေးမီနှစ်များ အတွင်းကတော့ TLD အသစ်တွေ ကိုမိတ်ဆက်ပေးခဲ့ကြပါတယ်။ ဥပမာ .big ? .mobi ? ပြီးတော့ .asia စသဖြင့်ပေါ့။ ဒါပေမဲ့အဲဒါ တွေရဲ့ကြီးထွားမှုကို ICANN က Domain names များအကြောင်း ရော်ရီဆယ်လင်ဂျုန်းနဲ့ ဆွေးနွေးကြည့်ခြင်း တင်းတင်းကျပ်ကျပ် ကန့်သတ် ထားဆဲပါ။
TLD တွေကို registries လို့ ခေါ်ကြတဲ့ဟာတွေနဲ့တည်ထောင် လည်ပတ်နေတာပါ။ ဥပမာ .com ကို verisign နဲ့လည်ပတ်နေတယ်။ တကယ်လုှို့ခညေည ရဲ့စီမံကိန်းဟာ အဖွဲ့အစည်းတွေကတဆင့် သွား မယ်ဆိုသူတို့ဟာ ဒိုမိန်းအသစ်တွေ ကိုရနိုင်မယ့် နည်းပညာပိုင်းအရည် အသွေးရှိကြောင်းပြရပါလိမ့်မယ်။သူ တို့ဟာသင့်တော်တဲ့ငွေကြေးပမာဏ ကိုလည်းပေးရမှာပါ။
(domain names အသစ် တွေကို) ဘယ်သူတွေက လိုချင်နေ တာပါလဲ။
နယူးယော့စ်ကအဖွဲ့တဖွဲ့ ဟာ .nyc ကိုလိုချင်နေပြီအခြား မြို့ တော်တွေကလည်းဒီလမ်းလိုက်လာ ကြတယ်။ ကုမ္ပဏီတွေ၊ ဈေးကွက် ရှာဖွေရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဟာ သူ တို့ရဲ့ brands တွေကိုမြှင့်တင်ဖို့ domains တွေလိုချင်နေကြတယ်။ အခြားစိတ်ကူးမှုတွေ ဖြစ်တဲ့ .smith လို၊ .jones လိုမျိုး လူသန်း ပေါင်းများစွာ နဲ့ဈေးကွက်ကိစ္စလုပ် နိုင်ဖို့စဉ်းစားကြတာတွေလဲပါတယ်။
ဒါဆို .xxx လို့ပေးရင်ဘာဖြစ် မလဲ။
xxx ဆိုတဲ့ domain အတွက် ကတော့ content ပါတဲ့ဆိုက်တွေ မှာ ဖိအားရှိနေခဲ့ပါတယ်။ အချို့ အုပ်စုတွေက စဉ်းစားတာကတော့ ဒါဟာကလေးတွေဆီကနေ မလို အပ်တဲ့အရာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အ သုံးဝင်တဲ့နည်း လုိ့တွေးကြတယ်။ အချို့ကတော့ porn sites တွေ ဟာအဲဒီဒိုမိန်းကိုသုံးတာရှောင်သင့် တယ်လို့မြင်တယ်။ Icann။ ဟာအ ခြေခံအားဖြင့် .xxx သုံးတာကိုငြင်း ပယ်ထားပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အခု အချိန်မှာတော့မီးစိမ်းပြ လောက်ပါ ပြီ။
ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား နဲ့ရော Domain name တစ် ခုယူလို့ရနိုင်မလား။
လက်ရှိမှာတော့ Domain တွေအားလုံးကို ရောမအက္ခရာနဲ့ ရေးတယ်။ ဒါပေမှဲု့ခညေည ရဲ့ စီမံ ကိန်းမှာအခြားဘာသာအက္ခရာနဲ့ domain names အသစ်တွေရေးဖို့ ခွင့်ပြုကောင်းပြုသွားမှာပါ။ ဒါ့ ကြောင့် web adress တွေမှာတ ရုတ်အက္ခရာသို့မဟုတ်အာရဘီအ က္ခရာနဲ့ရေးထားတာတွေပေါ်လာ နိုင်ပါတယ်။
“အားလုံးအတွက်အခမဲ့” freefor- all ဆိုတာကောင်းတဲ့ အရာ လို့ဘယ်သူကမှ ကျေနပ်နှစ်သိမ့်နေ မှာ မဟုတ်ပါဘူး။ domain အသစ် တွေဖြစ်ကြတဲ့ .big့ လို၊ .mobi၊ လိုမျိုးတွေဟာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုနည်း နေသေးပြီး၊ ၀က်ဘ်ဆိုက်ပိုင်ရှင် အ များစုဟာ .com ဒါမှမဟုတ် Country code ဖြစ်တဲ့ (ဥပမာ uk ဆို ရင် co.uk ) တို့ကိုပဲရွေးချယ် နေကြ ဆဲပါ။ ဒါပေမဲ့ 'domainers' လို့ ခေါ်ကြတဲ့ domain names တွေ မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေနဲ့ 'Cybersquatters' လို့ ခေါ်ကြတဲ့တန်ဖိုး ကြီးတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု name တွေကိုပိုင်တဲ့ သူတွေဟာ ဒါကိုအခွင့်အရေးကြီး တစ်ရပ်အဖြစ် ရှုမြင်ကြမှာပါ။ တန်ဖိုးကြီး brands တွေ ရှိကြတဲ့ ကုမ္ပဏီကြီးတွေကတော့ ငွေကုန် အချိန်ကုန်ခံပြီး ဖြစ်နိုင်သမျှ domains names တွေကို လိုက် ၀ယ်နေရမှာ ကြောက် နေကြပါတယ်။ တစ်ဖက်မှာလည်း ဒီဈေးကွက်ကို လွတ်လပ်အောင်လုပ် လိုက်တာကနေ နည်းနည်းပဲ သူတို့ရိတ်သိမ်းနိုင်မှာ စိုးလို့ပေါ့လေ။
Today, there have been 32 visitors (58 hits) on this page!